डिजिटल सम्पत्ति प्रबंधन को लागी व्यापार केस Martech Zone
सोमबार, जनवरी 27, 2014 सोमबार, जनवरी 27, 2014 जेन लिसाक गोल्डिंग
संसारमा जहाँ हाम्रा अधिकांश (वा सबै) फाइलहरू स across्गठनहरू मार्फत डिजिटल रूपमा भण्डारण गरिएका छन्, यो आवश्यक छ कि हामीसँग विभिन्न विभागहरू र व्यक्तिहरूका लागि यी फाइलहरूमा संगठित तरिकाले पहुँच गर्न सक्ने तरिका छ। यसैले, डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धन (डीएएम) समाधानको लोकप्रियता, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजाइन फाइलहरू, स्टक फोटोहरू, प्रस्तुतीकरणहरू, कागजातहरू, इत्यादि साझा भण्डारमा अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन आन्तरिक पार्टीहरू द्वारा पहुँच गर्न सकिन्छ। साथै, डिजिटल सम्पत्तिको घाटा एकदमै कम हुन्छ!
मैले टोलीसँग विडेनमा काम गरें, ए डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन समाधान, यस इन्फोग्राफिकमा, डिजिटल सम्पत्ति प्रबन्धनको लागि व्यवसाय केस अन्वेषण। व्यवसायका लागि साझा ड्राइभ प्रयोग गर्न सामान्य छ वा केवल अन्यलाई ईमेल मार्फत फाइलहरू पठाउन सोध्नुहोस्, तर यी असफल प्रूफ छैनन्। भर्खरको सर्वेक्षणमा businesses 84% ​​व्यवसायले रिपोर्ट गरे कि डिजिटल सम्पत्तिहरू खोज्नु नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो जब तिनीहरू डिजिटल सम्पत्तिहरूसँग काम गर्दा हुन्छन्। मलाई थाहा छ यो कति दु: ख हो र कति समय हराउँदछ जब मैले मेरो ईमेल संग्रह वा मेरो कम्प्यूटर फोल्डरहरूमा फाइल फेला पार्न सक्दिन। तर कल्पना गर्नुहोस् कि धेरै कर्पोरेटहरूको साथ एक ठूलो कर्पोरेट सेटिंगमा हताशता; त्यो धेरै हराएको समय, दक्षता र पैसा हो।
यसका साथै यसले विभागहरू बीच समस्याहरू पनि खडा गर्छ। Of१% संस्थासँग अन्य स्टाफ सदस्यहरूलाई संगठनमा सम्पत्तीमा पहुँच प्रदान गर्न समस्या हुन्छ, जसले विभागहरू बीचको सहयोगलाई घटाउँछ। यदि म सजिलैसँग मेरो कागजात सामग्री कागजातको साथ प्रदान गर्न सक्दिन भने, उसले आफ्नो काम पूरा गर्न सक्दैन। DAM ले संगठनका सबैलाई एक डिजिटल भण्डारमा पहुँच गर्न पहुँच प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूलाई व्यवस्थित भण्डारमा चाहिन्छ। डीएएमको साथ, चीजहरू चाँडो र अधिक कुशलतासाथ सम्पन्न हुन्छन्।
के तपाइँ हालै एक डिजिटल जेट प्रबन्धन समाधान प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंको संगठनमा डिजिटल सम्पत्तीहरूसँग व्यवहार गर्दा तपाईंले कस्तो प्रकारको समस्याहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ?
टैग: सामग्री मार्केटिङबाँधडिजिटल सम्पत्तिडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनतस्बिरहरूएकीकरणमार्केटिंग भिडियोहरूभण्डारभिडियो सम्पत्तिभिडियो भण्डारणफराकिलो